September 19, 2021 - Celegroup
ဒီအချက်တွေကို တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် တစ်သက်လုံး ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲတော့ဘူး
September 19, 2021 Celegroup1975 0
ဒီအချက်တွေကို တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် တစ်သက်လုံး ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲတော့ဘူး တကယ်ချမ်းသာချင်ရင် ဒါတွေ တကယ်လုပ်ပါ ။ (၁) အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွတဲ့ အလုပ်မရွေးပါနဲ့ ။ (၂) ချွေတာစုဆောင်း သူဌေးလောင်းတဲ့ ရသမျှကို အကုန်မသုံးပါနဲ့ စုနိုင်သမျှ စုပါ ။ (၃) အချိန်ဟူသည် အဖိုးတန်ဆုံးသော အရင်းအနှီးတဲ့ အချိန်ကို မဖြုန်းပါနဲ့ ။ အကြိုးရှိစွာ အသုံးချပါ ။ (၄) ကျမ်းမာခြင်းသည် လာဘ်ကြီး […]
တစ်မိနစ်မှာ ဘာဖြစ်လို့ စက္ကန့် ၆၀ ရှိရသလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်း
ငယ်ကတည်းက သိလာတဲ့အသိတစ်ခုက စက္ကန့် (၆၀) ဟာ ၁ မိနစ် ဖြစ်ပြီး မိနစ် (၆၀) ဟာ ၁ နာရီဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် ၆၀ ဖြစ်သလဲ..? ဘာ့ကြောင့် ၁၀၀ မဖြစ်တာလဲ..? စသည်ဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ဖူးကြမည် ထင်ပါတယ်။ စဉ်းစားတတ်တဲ့ကျောင်းသားကမေးတဲ့အခါ..ဆရာတို့ ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ..? အခုလို (၆၀) ကို အခြေထားပြီး တွက်တဲ့စနစ်ဟာ ခရစ်တော်မပေါ်မီ ၃၅၀၀ ခုနှစ် (BC 3500)ကတည်းက ဆူမားရီးယမ်း လူမျိုးတွေ […]
Unicode ကိုယ့်အိမ်မှာ ဘုရားတစ်ဆူ ကိုးကွယ်ထားပြီ ဆိုလျှင် ဘုရားရှိခိုးတဲ့ အခါ ဂုဏ်တော် တစ်ခုခုကို အာရုံလေးပြုထားပါ။ ဘုရားကို တစ်ခုခုလှူ ဒါန်းမှုပြုတဲ့ အခါ သက်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်ကဲ့သို့အာရုံယူထားပါ။ ဘုရားကို ကိုးကွယ်မှုပြုတဲ့ အခါ ဘုရားကျောင်းဆောင်အား နေ့စဉ်သန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်ပါ။ ဘုရားခန်းသန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ အခါ ပန်းရေချမ်းလည်းနေ့စဉ် ရေလဲလည်ပေးပါ။ ပန်းရေချမ်း လဲလည်မှုပြုတဲ့ အခါ ရိုသေသမှု တလေးတစားပြုမူ နေထိုင်ပါ။ ရိုသေသမှုနဲ့ စိတ်ထဲရှင်းနေတဲ့ အခါ ပြုဆဲကုသိုလ်ကို ဝမ်းမြောက်ပြီးနေပါ။ […]
Zawgyi မိဘကို ဆဲဆိုအော်ဟစ်သူများ လက်ရှိ ဘဝမှာတင် ခံစားရနိုင်တဲ့ ဒဏ် (၁၀)ပါး ကိုယ်က မှန်သည်ဖြစ်စေ ၊ မှားသည်ဖြစ်စေမိဘတွေကို ဒေါသတကြီး အော်ကြီးဟစ်ကျယ်ပြန်လာပြောဆိုရင် လက်ရှိ ပစ္စုန်ပ္ပန် ဘဝ မှာ ဒဏ်ဆယ်ပါးထဲက အနည်းဆုံး တစ်ပါး ပါးသင့်တတ်တယ်။Zawgyi မိဘကို ဆဲဆိုအောျဟဈသူမြား လကျရှိ ဘဝမှာတငျ ခံစားရနိုငျတဲ့ ဒဏျ (၁၀)ပါး ကိုယျက မှနျသညျဖွဈစေ ၊ မှားသညျဖွဈစမေိဘတှကေို ဒေါသတကွီး အောျကွီးဟဈကယြျပွနျလာပွောဆိုရငျ […]
မြွေပွေးလိုလူ မဖြစ်စေချင်…….(တန်ဖိုးရှိလို့ လုံး၀မကျော်သွားပါနဲ့)
မြွေပွေးလိုလူ မဖြစ်စေချင် ဘားအံ-ဘက်က မြွေဖမ်း အလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကရင်ကြီး တစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲဒီကရင်ကြီးက ခြေထောက် တစ်ဖက်က မသန်ရှာဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြွေဖမ်းတဲ့နေရာမှာတော့ အလွန်တော်တယ်။ တစ်ညကို ၂-ကောင် ၃-ကောင် လောက်ရတယ်။ သူဖမ်းလိုက်ရင်လည်း မြွေပွေးပဲ။ တစ်ကောင်ကို တစ်သောင်းလောက် ရတာကိုး။ လူငယ်လေးတစ်ယောက်က ‘‘ဖထီးမြွေပွေးကို ဘယ်လို ဖမ်းလဲဗျ’’လို့ ကရင်ကြီးကို မေးတယ်။ “ငါက ခြေထောက်မသန်တော့ လင်းမြွေတို့ ရေမြွေတို့ကို မဖမ်းနိုင်ဘူး။ အဲဒီကောင်တွေက လူတွေ့ရင် […]
ပိုက်ဆံချေးသူ ငှားသူ နှစ်ဦးစလုံး အဆင်ပြေတဲ့နည်း
ကိုယ်အနားမှာ ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ အားလုံးအဆင်ပြေစေချင်တယ် ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေ ချမ်းသာရင်သူငယ်ချင်းတွေ ချမ်းသာရင် ပိုပီတိဖြစ်တယ် ။ ကောင်းမွေးဆိုးမွေး ခံယူဖို့ပါ ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ ချမ်းသာမှမဟုတ်ဖူး ဆင်းရဲလဲ မိတ်ဆွေပါဘဲဗျာ ကူညီပါတယ် ကတိတော့ တည်ပါ ။ (၁) ပိုက်ဆံချေးမယ်ဆိုရင် ချေးမယ်လို့ပဲ ပြောလိုက်ပါ။ ဖြစ် ကြောင်းကုန်စဉ်ကို ဇာတ်စုံခင်းပြမနေပါနဲ့။ကြာပါတယ်။ မဟုတ်လည်း ချေးမှာပဲကို။ ဆိုတော့မရှိလို့ပဲချေးချေး၊ လက်လွန်နေလို့ပဲလှည့်လှည့်ပိုက်ဆံချေးတာဟာ ချေးတာပါပဲ။ (၂) ပိုက်ဆံတစ်ရာ နှစ်ရာမှသည် တစ်သိန်း […]
သင့်အကြောင်းကို တစ်စုံတစ်ဦးကတွေးနေပြီဆိုရင် ခံစားရမယ့်နိမိတ်များ
သင့်အကြောင်းကို တစ်စုံတစ်ဦးကတွေးနေပြီဆိုရင် ခံစားရမယ့်နိမိတ်များ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်အကြောင်းတွေးနေတာကို သိနိုင်မယ်ထင်လား? သိရောသိချင်လား? ခုပြောပြမယ့် အချက်တွေကသင့်အကြောင်းကို တစ်ယောက်ယောက်ကေတွးနေတဲ့အခါ သင့်မှာ ခံစားနေရမယ့် လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အကြောင်းတွေးတယ်ဆိုတာမှာ သင့်ကိုချစ်လို့ဖြစ်စေ မုန်းလို့ဖြစ်စေတွေးနေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင့်ကို ရန်ပြုဖို့ထိတွေးနေတယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကိုသိထားတော့သင်သတိထားနိုင်တာပေါ့. ကဲ..ဘယ်လိုတွေခံစားရမလဲ ဘာတွေလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်.. နှာချေခြင်း ဒီယုံကြည်မှုကတော့ အာရှနိုင်ငံတွေမှာအမြစ်တွယ်နေတဲ့ ယုံကြည်မှုလေးပါနော်..တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်အကြောင်းတွေးနေတဲ့အခါ သင့်နှာခေါင်းဟာယားယံစပြုလာပြီးမကြာခင်ထပ်ခါထပ်ခါနှာချေမှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်တဲ့။ ဒါကနေမကောင်းတဲ့ အချိန်အတွက်တော့အကျုံးမဝင်ပါဘူးနော်။ အအေးပတ်တာလည်း မရှိ နှာခေါင်းယားယံလောက်အောင် ရှုရှိုက်စရာလည်းမရှိပဲ အသားလွတ်ကြီးနှာတွေထချနေရင်တော့တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ အတွေးဗဟိုမှာသင်ရောက်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့ဘာကိုတွေးနေလဲဆိုတာ […]
(အသံတိတ် လူသတ်သမား) ကိုယ်တွေ့လေးမို့ပြောပြအုန်းမယ်
(အသံတိတ် လူသတ်သမား) ကိုယ်တွေ့လေးမို့ပြောပြအုန်းမယ် အားကစားလုပ်တော့ ငှက်ပျော ဖီးကြမ်းစားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဝယ်လာတယ် ဝယ်တဲ့နေ့ ဝင်းနေတော့ ၂လုံး စားတယ် နည်းနည်း ရင်ပူတာခံစားရတယ် ငှက်ပျောသီးကြောင့်လို့ ထင်မထားဘူး ည အိပ်ယာဝင် တစ်လုံးစားတော့ အတော် သိသာလာတယ် တစ်ညလုံး ရင်တွေပူ မနက်လည်း တစ်နေကုန် ရင်တွေပူ ပျို့အန် အတော်ခံစားရတယ် ဘာကြောင့်လည်း စဉ်စားရခက်ချိန် ငါးရောငိး ပြန်ရောက် ချိတ်ထားတဲ့ ငှက်ပျောဖီးကြည့်လိုက်တော့ အတော်လန့်သွားတယ် ပုံမှာ အတိုင်း […]
အိမ်မက်ထဲမှာ မြွေတွေတွေ့ရင် ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ
အိမ်မက်ထဲမှာ မြွေတွေတွေ့ရင် ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ အိမ်မက်ထဲမှာမြွေတွေမြင်ရင်ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ…. မြွေတွေအများကြီးအိမ်ထဲမှာရောအပြင်မှာရော နေရာအများကြီးတွေ့တယ်ဟုမြင်မက်မူ လာဘ်ရအံ့။ မြွေကဖားကိုမြိုသည်ဟုမြင်မက်မူ အိမ်နီးနားလင်မယားရန်ဖြစ်မည်။ မြွေအကြီးကြီး အိမ်ထဲမှာတွေ့တယ်လို့မြင်မက်မူ လူလိမ်နှင့်တိုးမည်။ မြွေဖြူကိုမြင်မက်မူ ငွေဝင်မည်။ မြွေကို အရေခွံလဲ တယ် ဟုမြင်မက်မူ ဘုရားဟောင်းတစ်ဆူ ထီးတော်အသစ်တင်တော့မည် ပြန်လည်ပြုပြင်တော့မည် လာပြီးအသိပေးတာ မိမိက လှူဒါန်းထိုက်လို့လာအသိပေးနိမိတ်။ အိမ်မက်ထဲမှာ စပါးကြီး စပါယ်အုံးလို မြွေအကြီး မျိုးမြင်မက်တယ် ဆိုရင် ရှေးဟောင်းစေတီရဲ့သာသနာစောင့်ပုဂ္ဂိုလ်က သာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ပေးသတိပေးတာတို့ စသည့်နိမိတ်ပါ ။ မြွေမှကြောင်အဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးခုန်တက်သွားသည်ဟုမြင်မက်မူ […]
သွားတိုက်ဆေး ရဲ့အသုံးဝင်ပုံ(၅)မျိုး မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ လူတိုင်းပထမဆုံးစရှာတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ သွားတိုက်ဆေးက အပါအဝင်ပါပဲ။ သွားတိုက်မှသာ သင့်သွားတွေက သန့်ရှင်းခိုင်မာမှာပါ။ အားလုံးက သွားတိုက်ဆေးဟာ သွားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာ သိထားကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်အလှအပအတွက်ပါ အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ သိပြီးပြီလား။ ဒါကြောင့် အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ သွားတိုက်ဆေးကိုအသုံးပြုပြီး ပျိုမေတို့ ပိုလှသွားစေဖို့ အသုံးဝင်ပုံ (၅)မျိုးကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ အစက်အပျောက်ဖယ်ရှားဖို့ ၁။ အဖြူရောင်သွားတိုက်ဆေးတစ်ဇွန်းကို ခွက်တစ်ခွက်ထဲထည့်ပါ။ ရေ လဘရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းထည့်ပါ။ ဒီနှစ်ခုကို အနှစ်ပုံစံဖြစ်အောင် ရောမွှေပေးပါ။ […]
ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ဖို့ ဂရုစိုက်ရမည့် အချက်လေးများ အိိမ်ထောင်ရေးတွင် ရှောင်ရှားနိိုင်ရန် ၁။ လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင် အိမ်ထောက်ဘက်ကို အပြစ်တင်ခြင်း လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွားပါ။အိမ်ထောင်သက် ရလာတာနဲ့ အမျှ အထစ်အငှော့လေးတော့ ရှိိတတ်ကြပါတယ်။ လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင်် တဘက်သားကိုအပြစ်တင် ရန်ထောင်ရင်တော့ ရန်ပွဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ အဲလိိုရန်ဖြစ်တာ ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်း နို်င်တဲ့ အပြင််မီးလျှံထဲကို ဓါတ်ဆီ လောင်းလိုက်သလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျရင် ဘယ်သူမှ အလျှော့ ပေးလို့ […]